Perfume yekuzadza uye capping mutsara
Kunonyanyisa dhayamita yemuromo bhodhoro
Adjustable liquid level (kure ne
Zviyero (kusanganisa mvura
mabhodhoro) * L * W * H）
Adaptive ambient tembiricha
Pneumatic pefiyumu capping muchina
Muchina uyu unotora uzere pneumatic kudzora, iyo inonyanya kukodzera pamuromo wezvinonhuwira girazi zvigadzirwa.
Uchishandisa reza musoro wakagadzirwa nezvinhu zvakakosha, isa bhodhoro regirazi nemubhadharo mumusoro wekutora, woisa mucherechedzo nemabhodhoro egirazi nekuenzanisa mweya wekumanikidza.
Zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi, kuburikidza nekugadzirisa chaiko, kuti uwane kumhanya kwakaringana tayi uye mhedzisiro, ndiyo sarudzo yakanaka.
Nheyo yekushanda yemuchina wekusunga ndeyekuvhura vharuvhu yemaoko uye nekuibatanidza kune iro gasi sosi. Isa bhodhoro regirazi rine kamwene mukanwa memuromo, pusha pneumatic switch, shandisa tafura inosimuka kugadzira bhodhoro rakatwasuka, uye panguva imwecheteyo, humburumbira hwakasungirirwa pasi, uye mushurekuomesa muromo, humburumbira hunobva hwadzokera panzvimbo yekutanga. Imwe tayi chiuno
Sunungura iyo yemhangura yepakati yekumisikidza sikuru mumuromo wetayi, uye tenderedza iyo yemhangura kiyi yekumusoro nekudzika. Kazhinji, iyo mhezi inoiswa mumuromo meya uye iri zvishoma pasi pane iyo yepasi ndege ne20 ~ 30 waya. Iyo chaiyo yekugadzirisa chinzvimbo inosiyana zvichienderana nemuromo.
Pneumatic pefiyumu yekuisa chisimbiso muchina ndechimwe chezvinhu zvezvinonhuwira kuzadza nekuisa chisimbiso. Iyo inoshandiswa kujekesa iyovhavhavhavhavhavhavhavha yeakasiyana marondedzero. Simbiso dhayamita; Kuvhara chisimbiso chekupfuura; 99%. Yakatsindirwa mweya kumanikidza: 4 ~ 6kg / cm2.
Ongorora: Kana bhodhoro rapwanywa mbama, tinya switch yekudzoka uye bhodhoro rinowira roga.
Operation Kuita zvisiri izvo kunogona kukonzera mamiriro ezvinhu ane njodzi, zvichikonzera kukuvara kana kukuvara kwezvinhu! Kana muchina uchinge uchishanda, chenjera kuti uswedere padyo nenzvimbo yebasa kuti udzivise njodzi yako wega!
▲ Vasina-nyanzvi mahunyanzvi, ndapota usatarisa muchina, zvikasadaro zvinogona kukonzera kukuvara kumuchina.
Zviyero: 6000 * 900 * 750mm, kusanganisira yekupedzisira 500mm yekuunganidza chikuva
Bhandi upamhi: 250mm
Speed: 1-8m / Maminitsi, chinjika
Kuzadza uye capping muchina wekugadzira mutsara: 30-40 mabhodhoro / miniti
Disc bhodhoro muchina
Yakatwasuka 6 peta yekuzadza muchina
Otomatiki kavha capping muchina
Round bhodhoro yekumisikidza muchina
Ink otomatiki inkjet purinda
Chinyorwa kurongedza yekutakura chikuva
Yekumusoro uye yakaderera tepi yekuisa chisimbiso uye yekuisa muchina
Ongorora: Uku ndiko kugadzirisa kwekutanga uye kwakakodzera mabhodhoro akajairika anotenderera.
Kana iro rakasarudzika-bhodhoro rizere, rinoda risiri-rakagadzirwa dhizaini, kana kuwedzera iro remukati plug, pombi musoro, kana zvimwe zvekurongedza zvishandiso, nezvimwe.
Kune rimwe nerimwe bhodhoro uye chivharo, imwe neimwe yekuwedzera yeiyo fomati inobhadhariswa pamutengo wakasiyana.
Main michina sumo uye tsananguro
1. Disc bhodhoro muchina (bhodhoro muchina)
Bhodhoro risingabvumirwi pamurume rinoisa bhodhoro mumhepo inotenderera, uye iyo turntable inotenderera kuenderera ichiendesa bhodhoro mubhandi rekutakura, uye inopinda mubhodhoro yekuwacha uye muchina wekuzadza wekuzadza. Chiri nyore kushandisa, mashandiro ari nyore chikamu chakakosha, uye inogona zvakare kushandiswa sebhodhoro rekuunganidza bhodhoro.
Huru technical parameter:
Zvinyorwa zvinoshanda: 50-500ml
Inoshanda bhodhoro dhayamita: φ10-φ80mm
Inoshanda kukwirira kwebhodhoro: 80-300mm
Simba rekugadzira: 0-100 mabhodhoro / min bpm (kuchinjisa kumhanya gavhuna inogadziriswa)
Zviyero: 600 * 600 * 1200mm
2. Linear 6 kamwene nyora muchina wekuzadza
Nozzle nhamba yemachina ekuzadza: 6 mitsara yakatwasuka (inogona kuverengerwa zvinoenderana nehuwandu hwekugadzira)
Kuzadza zvirevo: 100-400ml
Kuzadza kumhanya: 2000-2400 mabhodhoro / awa
Voltage simba: 220v / 50hz. 1.2-2.0kw
Kumhepo kunobva kumanikidza: 0.4-0.6mpa
Zviyero: 2000 * 1300 * 1900mm Kurema: 320kg
Mutsetse wechitanhatu-musoro sosi yekuzadza muchina inotora tekinoroji yepasirese, ichishandisa PLC uye yemagetsi fiber optic sensor yekudzora, uye iyo microcomputer chinyorwa chinoratidza kubata kwekugadzira interface oparesheni. Iko kune kuzadza bhodhoro. Hapana bhodhoro rinomira kudiridza. Iine basa rekuverenga. Rekodha kugadzirwa kwezuva razvino - mwedzi uno. Iyo midziyo inonyanya kushandiswa pakuzadza kwakasiyana-siyana sosi sosi. Iyo inokodzera chikafu sosi yekuzadza. Iko pamusoro pemidziyo uye nehukama pamusoro pechinhu zvakagadzirwa ne304 simbi isina simbi, hapana kudonha, hapana kudhirowa. Nyore kuchenesa. Hapana akafa angle, izere zvinoenderana nenyika mishonga yemakambani indasitiri GMP zviyero. (Inonyanya kushandiswa kuzadza granular paste, ketchup, nezvimwewo).
Zvimiro zvemidziyo: hapana zvakasara pamusoro pebhodhoro mushure mekuzadza, kuverengera pamusoro pebhodhoro uye pamusoro pemidziyo zvakachena uye zvine hutsanana, zviri nyore kushanda, zviri nyore kuchengetedza. Yakagadzika kushandisa, yakakwira mune otomatiki. Inokodzera mvura, fluid uye kumwe kuzadza.
3. Otomatiki kavha capping muchina
Otomatiki kavha rotary (kumanikidza) chivharo muchina, uchishandisa epamberi tekinoroji, uchishandisa PLC uye yemagetsi fiber optic sensor kutonga, micro-komputa mameseji kuratidza kubata kwekuita interface interface. Otomatiki kavha - otomatiki muhombe (kumanikidza) kavha. Uye nekuverenga basa. Iwe unogona kurekodha kugadzirwa kwezuva razvino - mwedzi wazvino.
Kana iyo bhodhoro mushure mekuzadza rwoga ichipinda mu rotary (kumanikidza) chivharo muchina - chivharo chevhavha rwoga rinoronga zvakashata uye zvisina kujairika mabhodhoro emabhodhoro otomatiki, uye anozvirongedza otomatiki pamuromo webhodhoro, uyezve iyo yekukanda musoro inotenderera otomatiki kavha (tinya) Zvakanaka - pinda inotevera maitiro. Midziyo iyi inokodzera kuzadzwa kwemvura dzakasiyana siyana uye chivharo chemabhodhoro akasiyana siyana (kumanikidza) kavha. Iyo yakakodzera kuzadza iyo yemishonga, kemikari, mishonga yekuuraya zvipuka, chikafu uye chinwiwa, zvipoda uye mamwe maindasitiri (kana muto, michero) Vhiniga, yemumvura mvura, nezvimwewo) Kumusoro kwemidziyo uye nekubatana pamusoro kwechinhu kwakagadzirwa 304 Stainless simbi zvinhu, hapana kudonha, nyore kuchenesa. Hapana akafa angle, zvizere zvinoenderana neyemunyika mishonga indasitiri GMP zviyero.
Hapana zvakasara pamusoro pebhodhoro mushure mekuzadza, kuverengera pamusoro pebhodhoro uye pamusoro pemidziyo yakachena uye nehutsanana, zviri nyore kushanda uye zviri nyore kuchengetedza. Kugadzikana kushandiswa uye yakakwira otomatiki kusimba.
Bottle muromo dhayamita Specification: 20-80mm
Rotary (kumanikidza) kufukidza kumhanya: 2000-2500 mabhodhoro / awa
Zviyero: 2000 * 900 * 1600mm
4. Yega-inonamira yakatwasuka yakatenderera bhodhoro otomatiki ekunyorera muchina
• Mushini wese unoshandisa iyo yakakura PLC yekudzora sisitimu yekuita iyo muchina wese unomhanya zvakanaka uye nekukurumidza kumhanya.
• Iyo inoshanda sisitimu inodzorwa neinobata interface, iri nyore kushandisa, inoshanda uye inoshanda.
• Yepamberi tekinoroji inokurumidza uye yakagadzikana
• Wide akasiyana mafomu ekurongedza kutenderera mabhodhoro muhukuru hwese
• Inline roll roll bhodhoro rekusimbisa chitaridzi
• Inesarudzo yekubatanidza tambo yezvikamu zvepamberi neshure, kana sarudzo yekugashira turntable kuti ive nyore kuunganidza, kurongedza uye kurongedza zvigadzirwa zvakapedzwa
Kumusoro kwemidziyo kunoitwa nesimbi isina 304 isina tsvina, zvinoenderana nemitemo yenyika yeGMP.
Voltage tsananguro: AC220V 50 / 60HZ imwechete chikamu
Simba rekushandisa: 300W
Zviyero: 2000 (L) × 700 (W) × 1270 (H) mm
Kunyora kumhanya: 40-100 mabhodhoro / min (yakajairwa kumhanya 3.5m / min)
Chinyorwa chinopa nzira: kuruboshwe kurudyi
Muchina uremu: 200KG
Kunyora kunyatso: ± 1mm ​​(kunze kwekukanganisa kuri pakati pechinamira uye nechiratidzo zvacho)
Inoshanda bhodhoro mhando: denderedzwa bhodhoro.
Inoshanda mudziyo renji: yekunze dhayamita 16-150 mm, kukwirira 35-400 mm
Inoshanda label renji: kukwirira 15-200 mm, kureba 23-400 mm
Label vhoriyamu zvinodiwa:
a) Chinyorwa chepasi pepa chakagadzirwa negirazi regirazi (kureva pepa rinoonekera);
b) ukobvu hwepepa rechitupa hausi pasi pe25 × 10-6m (25μm);
5. Otomatiki inkjet purinda
Zviyero: 370 × 260 × 550
Kuwedzera font: inogona kuwedzerwa kusvika kapfumbamwe
Simba remagetsi: AC220V 50Hz 100VA
Kuchengetedza ruzivo: 60 anodhinda ruzivo
Nhamba yemitsara yakadhindwa: 1-2 mitsara (1 mutsetse muChinese)
Yekumhanyisa kumhanya: 1400 mavara / (5 × 7)
Huremu hwese hwemuchina: 30 kg
Unhu hunyoro: 90% kana pasi
Ambient tembiricha: 10-45C
Iyo yakavakirwa-mupombi pombi inkjet purinda inotora yepasirese yakakurumbira yakavakirwa-mukati pombi yakavharwa-redunhu ink drive system, iyo inobvisa zvachose kusvibiswa kwenzvimbo yekunze uye inochengetedza iyo solvent yekushandisa. Iyo yepasirese inozivikanwa magineti dhiraivha pombi, epamberi ingi kutenderera filtration sisitimu, inosanganisirwa neyakakwira yakasanganiswa yedunhu yakazvimiririra yakagadzirirwa naLeadjet, kuve nechokwadi chenguva refu kugadzikana kushanda kwemuchina. Inogona kupurinda Chinese, Chirungu, manhamba uye mapatani online, uye inogona kudhinda yakakwira-tsananguro manhamba, zvinyorwa uye mifananidzo pane akasiyana zvinhu. Inoshandiswa zvakanyanya mukudya, mishonga, kemikari, michina uye zvemagetsi, zvekuvaka uye tambo, zvekutakura zvinhu uye mamwe maindasitiri.
6. Chinyorwa kurongedza yekutakura chikuva
Iyo yekuratidzira chikuva chiri pamurume chinoshanda kuchikuva chekutora mifananidzo, tsiva uye kurongedza. Anoshanda anogona kugara pamativi ese epuratifomu yekushanda. Kuzadza, kunyora manyore, kutora mavhidhiyo, tsiva uye tsiva Bhodhoro rinobva rapinda mune dzimwe nzira pabhandi rekutakura (kureba kwakagadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa)
Simba remagetsi: 220v / 50hz
Kumhanya: 40-120 mabhodhoro / min (kukurumidza kuchinjika)
Miganhu: 2000 * 750 * 1100mm (inogona customized maererano kureba inodiwa)
7. Tepi yekumusoro uye yezasi yekuisa chisimbiso uye yekupakisha muchina
Iyo otomatiki yekuisa chisimbiso uye kurongedza muchina ndeye kurongedza muchina unobatanidza otomatiki kuisa chisimbiso uye kurongedza. Inogona kushandiswa ne otomatiki yekupakata tambo, otomatiki ekumusoro uye ezasi ekuisa chisimbiso tepi uye kaviri-kupasa kurongedza kuti uone unmanned kurongedza. kushanda kwakanyanya kushanda. Yakashandurwa zvakanyanya kugadzirwa kwemazhinji emishonga, zvemagetsi, zvemazuva ese makemikari, zvigadzirwa, nezvimwe.
Magetsi: 220V / 380V 50Hz / 60Hz 1.5 KW
Kumhanyisa kumhanya: 6-10 makesi / min
Simbiso saizi: L200-600 W200-500 H150-500 (mm)
Saizi yetepi: 48 ～ 60 72 (mm)
Kurongedza tepi saizi 10-14 mm
Kraft bepa tepi, BOPP tepi
Saizi yemuchina: L2000mm x W1400mm x H1580mm
Gross huremu / net uremu: 400kg
Pashure: Mafuta anosanganiswa nemvura phacoemulsification inopisa magetsi-ekuchengetedza michina
Zvadaro: Kavha Yekugadzira Line